रामेछाप । आसन्न बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा खाडाँदेवी गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर ७ को वडाअध्यक्षका प्रत्यासी सिरे तामाङले घरदैलो प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन ।
पूर्वगाविसको पूर्वअध्यक्ष शिरे तामाङ संघीय संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा साविकको गाविस अहिलेको वडा–७ खाँडादेवीको नेकपा एमालेको तर्फबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार रहेका हुन ।
उनी अहिले आफूले वडामा भए गरेको व्यतिथि, अराजकता र आर्थिक अनियमितिता तोड्नको लागि अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको बताउँछन् ।
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले आफूलाई अरुभन्दा अब्बल उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । वडा विकासको भिजनसहित आएका तामाङसँग गरिएको कुराकानी :-
१.वडाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएको छ, विकास योजना के–के छ ?
-आवश्यक सडक विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणको विकास र कृषिलाई बढी जोडदिने मेरो योजना छ ।
२. तपाईसँग अरु उम्मेदवारकोभन्दा फरक योजना के छ ?
-सुशासन पारर्दशिता नै मेरो पहिलो आधार र प्राथमिकता हो । मलाई अपराधका गतिविधिहरु बढेको महसुस भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र सुशासन पद्धतीलाई कायम गर्ने मेरो प्रमुख लक्ष्य हो ।
३. तपाईलाई नै किन भोट दिनुप¥यो ?
-पहिलानै गाविसको अध्यक्ष भएको हो । त्यो बेला समाजमा कुनै बदमासि नगरेको । इमान्दारीता भएर पारर्दशिक र स्पष्टता भएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले म नै आवश्यकता भएको हो । मलाई जनताले जितायो हाम्रो माग पुरा हुन्छ भनेर जनताले मलाइनै माग गरेको छ । त्यै भएर मैले वडा अध्यक्षमा उमेरदावरी दिएको हो ।
४.तपाईको पार्टी अहिले विभाजन भएको छ, के तपाई जित्नुहुन्छ, के छ आधार ?
-पार्टी कमजोर छैन, देख्दा एमाले विरुद्ध गठबन्धन देखिने अर्को तिर एक्लै भएको दखिन्छ । केही मानिसहरु गठबन्धनमा छन् । हेर्दा जनता गठबन्धमा देखिन्छ । तर, जनता एमालेसँग जोडिकएको छ । हामी पहिला पनि २००७ सालको कुरा गर्दा राजा र कांगे्रस बिचको मेलमिलाप भएको छ । त्यही बेला बी.पीले भनेको छ पुष्पलाललाई गएर अब हामी मेलमिलाप गठबन्धन गर्न नेपाल र्फकन भनेर । त्यस बेला पुष्पलाले जवाफ दिएको छ कि, राजासँग गठबन्ध गर्दिन । म जनतासँग मेलमिलाप गर्छु । अनि मात्र म नेपाल फर्कन्छु । त्यसै अहिले साशकसँग गठबन्ध होइन जनतासँग गठबन्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसैले जित्ने आधार देखेको छु ।
५. वडाध्यक्ष जित्दै गर्दा वडा विकासको अरुभन्दा फरक के देख्नु भयो ?
-पर्यटकीय क्षेत्र धेरै छ, यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, नयाँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, समुदायको आय आर्जनलाई हुने वातावरण बनाउँछु, युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ, आवश्यकभन्दा अनावश्यक भत्काउने काम गर्नुहुन्दैन । यसले वातावरणलाई खल्लबल्लाउछ । आवश्यक ठाउँमा बाटो खन्नुपर्छ । सिँचाई गर्नुपर्छ, अनावश्यक ठाउँमा योजाना बनाउनुहुन्दैन् । दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । दिगो विकासबाट जनताको सेवा गर्ने हो । यसले स्तरीयरुपमा मदत गर्छ ।
६.चुनावको बेलामा वास्था गर्ने चुनाव पछि बेवास्ता गर्नुहुन्छ ? अरुभन्दा फरक भिन्ता के छ ?
-अरु भन्दा भिन्न गर्नै पर्छ । हामी फरक ढंगले नै जानुपर्छ । फरक सोच, व्यवहार गरी समुदासँग अन्तरक्रिया गरेर अहिलेका युवासँग बसेर युवा, महिला, कृषि, शिक्षा जस्ताको छनोट अन्तक्रिया हुनुपर्छ । यसबाट निष्र्कष निकाल्नुपर्छ । सहि योजना छनोटबाट नै योजना तर्जु राख्न सकिन्छ ।
७. बडामा बजेट थोरै हुन्छ, ठूलो योजनाका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?
-एमालेको आफ्नो गाउँ आफै बनाउन भन्ने योजना छ । त्यसमा आफुले छानेको योजनालाई सामुदायलेनै मदत गर्छ । अर्को कुरा सबै कुरा हामीले बाह्य रुपमा मात्र गदैन् । स्थानिय सुरक्षाको पहिचान
गरेर नै अगाडि बढियो भने विकासको सम्भावना बढी हुन्छ । हामीले बजेटको पैसामात्र हेरिएको होइन्, आफूले पनि समन्वय गर्नुपर्छ, समन्वयमा श्रमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसैबाट कुनै लाभ फाइदा तथा नाफा नभएर सेवामुखी ल्यायो भने विकासका लागि बजेट नै ठूलो कुरा होइन । योजनालाई सहि पहिचान गर्नुपर्छ । यसले बजेटको असंभव भन्ने हुने देखिन्दैन् ।
८.अहिले जनताले तपाईले भनेको जस्तो श्रमदान गर्छन् ?
-जनताले चाहेको कुरामा श्रमदान गर्छन् । बहुसंख्या जनतालाई जानकारी नभइकन एकपक्ष हुन्छ । त्यहाँ श्रमदान हुन्दैन् । आम समुदायका जनताले सन्तान गर्छ । कुनै पनि निमार्ण कार्य बजेट यति छ, लागत यति छ भन्ने कुरामा बाहिरको ठेकेदारलाई दिँदा नाफा लिइन्छ । हाम्रो काम हो, हामी आफै गर्नुपर्छ भन्ने, ठाउँमा त्यहाँ धेरैले श्रमदान गर्छ । दियो विकासमा सहयोग गर्छ ।
९. कुनै उदाहरण छ ?
-त्यस्तो काम गाविकसमा वडाध्यक्ष हुदाँ पनि काम गरेको हो , जस्तै, पुल बनाएको छु । त्यो पुल बनाउदा नाफा मुखी नभएर दियो विकास भएको छ ।
१०. अध्यक्ष भएपछि तपाई कसरी वडा कार्यालय चलाउनुहुन्छ ?
-वडा कार्यालय जस्तो हुन्छ । कर्मचारीले जनताको सेवा दिनेहुन्छ । त्यहाँको प्रशासनिक मापदण्डको हुन्छ । कुनै व्यक्तिबाट संचालन नएभर, राज्यको एउटा कर्मचारी कानुनी रुपमा संचालन हुनेछ । जप्रतिनिधिको हकमा जनप्रतिधिहरु जनताको सेवा र पारर्दशिक गर्नै, सूचनाको हकमा सूचना सुप्ररिवेशन गर्ने सबै कुराको जानकारी दिने । जनतको भावनालाई कदर गरेर व्यस्थित गरेर जानेछु ।
११. अन्त्यमा केही भनुहुन्छ ?
-सबै कुरालाई सुसाशित, प्रारदर्शिक दियो विकासमा कुनै लोप लाच नगरीकन जनताको भावना भन्दा बाहीर नगइकन, आफनो स्वच्छ ढंगबाट काम गरिन् । जनताको भावनलाई कदर गरेर निष्कर्षणलाई नै ठोस मानेर योजना तजुमा कामलाई अगाडि बढाउने ।